अब काँग्रेस पनि फुट्को दिशा तिर – पौडेल समूह आक्रामक – GALAXY
अब काँग्रेस पनि फुट्को दिशा तिर – पौडेल समूह आक्रामक
काठमाडौं, ६ असोज ।प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार र पार्टीभित्र पेलेरै बढेका छन् । उनले धमाधम आफू निकटस्थहरुलाई मन्त्री बनाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भएपछि आफूले सपथ लिंदा नै गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड र कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुरलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे । आज देउवाले परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई नियुक्त गरे ।
मन्त्री भएका सबै देउवा निकटस्थ हुन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा नेकपा एस र जनता समाजवादी पार्टीलाई समेत समेटेर जाने तयारी भइरहँदा देउवाले खड्कालाई आजै नियुक्ति दिए ।
अहिलेसम्म मन्त्री भएकाहरु काँग्रेस नेतामध्ये सबै देउवा पक्षधर छन् । देउवा इतर समूहबाट कोहीपनि मन्त्री भएका छैनन् । यसले काँग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । देउवा पेलेरै जाने रणनीतिमा देखिएका छन् । उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई बेवास्ता गरेर बढेको आरोप लगाइएको छ ।
पौडेल पक्षले परराष्ट्रमा सुजाता कोइराला या डा. मीनेन्द्र रिजालमध्ये एकलाई बनाउन चाहेको थियो । देउवाको कदमपछि पौडेल पक्षको आकस्मिक बैठक महाराजगन्जस्थित महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाको निवासमा बसेको छ । पौडेल पक्ष देउवाको पछिल्लो कदमविरुद्ध आक्रामक बन्ने बुझिएको छ ।
देउवा पेलेरै बढ्ने शैलीमा देखिएका छन् । पौडेल पक्ष पनि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । यसले काँग्रेसभित्र टकराव बढेर गएको छ । स्मरणीय रहोस् देउवा प्रधानमन्त्री बन्न तयार नभएको अवस्थामा पौडेल पक्षको दबाबमा बढेको थिए ।